8YarWinPonPyin 2.0 APK Download - Android Education Apps
APK Downloader Apps Education 8YarWinPonPyin 2.0
8YarWinPonPyin is Bed Time Story ( Myanmar )Mobile app which encourage to improve the children's thinkingskill, learning skill, listening skill and understanding skill.Children love the stories. Giving more time to Children forpossessing love and their appreciation .Haveagreat time!
Note: New version 2, we use unicode Myanmar font. Hopefully,Android version 4.2.2 users might able to read Myanmar font.Feedback is highly appreciated.
For New Apps Info , Like Us : https://www.facebook.com/ServInno.mm
App Information 8YarWinPonPyin
Visit website Email kyawzinbusiness@gmail.com
Mentor9 1.0.5 APK
Mentor9 ကို ကိုးတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရာမှာလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဆွဲထားပါတယ်။လက်ရှိစာသင်ကြားနေတဲ့ ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးထားတဲ့အတွက် စာလေ့လာရာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကူအညီရမှာ သေချာပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ feature တွေကတော့- စာကြောင်းတိုင်း စာလုံးတိုင်းကို US အသံထွက်နဲ့ ဖတ်ပြခိုင်းလို့ရတာ- ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာလည်း အနှေးနဲ့ အမြန်ဆိုပြီးစိတ်ကြိုက်ဖတ်ပြခိုင်းလို့ရတာ - စာကြောင်းတွေကိုတစ်ကြောင်းစီဘာသာပြန်ထားတာ - ဖုန်းထဲမှာ Myanmar font ရှိစရာမလိုတာ (udon't need Myanmar font to use this app) - ပုံတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာ- ဖတ်စာအုပ်ထဲကမေးခွန်တွေကိုလည်း ဖြေပြထားတဲ့အပြင် - ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိကျေညက်လဲပြန်စစ်ဆေးနိုင်တာ - grammar အမျိုးစုံထည့်ထားပေးပြီး -ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်လို့ရတာ ကိုးတန်းဆိုတာ ဆယ်တန်းရဲ့အခြေခံဆိုတော့ဆယ်တန်းမေးခွန်းဟောင်းထဲက grammar တွေကို ဖြေကြည့်ထားတော့ ဆရာမဥာဏ်စမ်းမေးမှာ စိတ်မပူရသလို ဆယ်တန်းအတွက်လည်း အထောက်အကူရတာပေါ့နောက်ထပ် နောက်ထပ် feature အလန်းတွေကိုလည်း နောက်ထွက်လာမဲ့ versionတွေမှာ ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးသွားမှာပါ။ ပြီးတော့ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက THISIS freeeeeeeeeeeeeeeeee.